CDM Support Magway – Community Services – Civilised Forums of Myanmar Community
Mar 08, 2021 2:23 am
CDM Support Magway အနေဖြင့်
၁။ ပြည်သူမှ ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ခြင်းအစီအစဉ်
၂။ နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးခြင်း အစီအစဉ်
၄၊၊ စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ ကူညီမှုအစီအစဉ်
၅။ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုကူညီရေးအစီအစဉ်များ ကိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးမှ အကူအညီများ -
ယနေ့ အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီး ပြည်သူ့ဘက်ကရပ်တည်သော ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် ရံပုံငွေအလှူခံရရှိမှု နာရီပိုင်းအတွင်း စုစုပေါင်း ၁,၆၀၈,၇၅၀ ကျပ်တိတိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ အလှူငွေထည့်ဝင်ခဲ့သော ပြည်သူတစ်ဦးချင်းဆီကို ဂါဝရပြုကျေးဇူးအထူးတင်အပ်ပါတယ်။ နီးစပ်ရာပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ လိုအပ်သောအခက်အခဲများအတွက်အကူအညီလိုအပ်မှုများ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများ၊ CDM နှင့်ပတ်သတ်သမျှ သတင်းအချက်အလက်များအားလုံးကို ယခု CDM Support Magway ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာနှင့် #CDMSupportMagway မကွေးတိုင်းဒေသကြီးယာယီက်ာမတီမှ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်များကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါပြီ! အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်! 💪🇲🇲💪
၁။ ကိုမင်းကိုကို - 09.767739039
၂။ ကိုအောင်မျိုးသူ - 09.795495296
၃။ ကိုကျော်ကိုရှိန် - 09.970304955